Uyibhalisa njani i-Kindle Paperwhite
Ukuba uthenge i-Kindle Paperwhite yakho ngeAmazon, ihanjiswa sele ubhalisile. Nangona kunjalo, ukuba uthenge i-Kindle Paperwhite kwivenkile (enje ngeThagethi, iStaples, okanye iBest Buy) okanye uyifumene njengesipho, kuya kufuneka uyibhalise.
Ukuba ufuna ukubhalisa isixhobo sakho, uza kubona isikrini emva kokuba usete iWi-Fi.
Ukuba uneakhawunti yeAmazon, cofa Sebenzisa iAkhawunti yeAmazon ekhoyo. Faka iakhawunti yakho ye-imeyile nge-imeyile kunye negama lokugqitha. (I-Kindle Paperwhite ingenisa eyayo inombolo ye-serial, ke awudingi kuyifaka.) Thepha Ngenisa.
Ukuba awunayo iakhawunti yeAmazon:
Thepha Yenza iAkhawunti eNtsha.
Khetha ilizwe okanye uMmandla kwimenyu ebonakalayo kwaye ucofe uQhubeka.
Faka igama lakho elipheleleyo, idilesi ye-imeyile, kunye negama lokugqitha. Qinisekisa igama eligqithisiweyo emva koko ucofe iakhawunti.
Faka indlela yokuhlawula kunye nedilesi yetyala.
Kuya kufuneka usete indlela yokubhatala yeakhawunti yakho oyokuyithenga kwiVenkile yohlobo. Indlela yokuhlawula ingaba yikhadi lesikweletu okanye ikhadi lesipho elithengwe kwiAmazon.
Thepha Qhubeka ukuseta.
Ukuba unonxibelelwano lwasentlalweni olunxulunyaniswa neakhawunti yakho yeAmazon, uya kucelwa ukuba uqinisekise ukuba ufuna ukudibanisa ezo kuhlobo lwakho. Uya kuba nethuba lokuseta ulawulo lwabazali. Ungayenza yomibini le misebenzi mva.
Yiyo leyo! Ngoku ungazithenga iincwadi kunye nokunye okuqulathiweyo kwiAmazon kwaye uzihambise ngaphandle kweengcingo kwiPhepha lakho lePhepha. Ukuba uthenge umxholo ngelixa ulinde i-Kindle Paperwhite ukuba ifike, ezo ncwadi ze-e ziya kuvela kwiscreen seKhaya emva kokuba i-wireless ivuliwe kwaye nesixhobo siyazibhalisa.
Emva kokuba inkqubo yobhaliso igqityiwe kuya kwenziwa isifundo esifutshane, sikubonise iziseko zokuhamba kwiscreen sokuchukumisa. Sukuba nexhala xa ulibale ezinye zeenkcukacha abazibonisayo.
Xa isifundo sigqibile, ubona iScreen sasekhaya, esidwelisa ileta eyamkelekileyo, isiKhokelo soMsebenzisi sohlobo, kunye nezichazi magama ezakhelwe-ngaphakathi: Isichazi-magama esitsha saseOxford American kwaye i I-Oxford Dictionary yesiNgesi . Nawuphi na umxholo owuthengileyo uza kuboniswa nawo.
Ukuba ufuna ukuphinda ubhalise kwaye uphinde ubhalise isixhobo sakho, la manyathelo alandelayo aya kukukhokela kule nkqubo.
Qinisekisa ukuba i-wireless ivuliwe.
Umahluko phakathi kwe-methylprednisolone kunye ne-prednisone
Cofa Imenyu-> Useto → Ubhaliso.
Xa ucofa ukuBhalisa, ukuba iphepha lakho lohlobo lwePhepha elisele libhalisiwe, uya kubona isilumkiso sokuba sowususa ubhaliso kuhlobo lwePhepha lePhepha. Thepha Rhoxisa ukumisa le nkqubo.
Khetha ukubhalisa usebenzisa iakhawunti esele ikhona yeAmazon.
Ngenisa iziqinisekiso zakho zokungena kwiAmazon (iakhawunti yakho ye-imeyile kunye negama lokugqitha), kwaye ucofe u-Ngenisa.
iwotshi ye-alamu kwifowuni yam
ukungenisa uluhlu lokudlala lwe-iTunes ukuze ubone
Ungawufumana njani umsebenzi oguqulweyo
suppository yomntwana ukuqhina
Iziphumo zenaliti ze-toradol
kunye ne-2016 isonka sekhuphoni
iziphumo ebezingalindelekanga ze-lidocaine